Miditra Amin’Ilay Korontana Ao Tiorkia i Rosia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Jona 2013 4:45 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, Español, русский, polski, Français, srpski, English
Raha toa ny ao Istambul ka mbola mitohy ny hozongozonin'ny korontana faobe [en] manohitra ny Praiministra Recep Tayyip Erdoğan, dia manaraka akaiky ny fizotrany sy miresaka ny raharaha ny RuNet. Ho an'ny Rosiana dia i Torkia no toerana be mpifidy indrindra amin'ny fotoam-pialan-tsasatra, izay voasariky ny moron-dranomasiny, ny tsy fahalavirany, ny hamoran'ny sarany sy ny fisian'ny fifanarahana ahazoana Visa malalaka nifanaovany tamin'i Rosia. Tamin'ny taon-dasa fotsiny, teo amin'ny 3 tapitrisa teo ireo Rosiana afaka nitsidika an'i Torkia. Raha toa ny fahalinana amin'ny zava-mitranga ankehitriny any an-toerana mety ho hovoamariky ny ahiahy ho an'ireo dia fivahinianana tsy ankamerim-bola, na i Rosia izy tenany aza tsy vahiny mihitsy amin'ny fidinàna an-dalàmbe tao anatin'izay roa taona izay. Maro ireo Rosiana no haingana tamin'ny fampitahàna : teo amin'ireo hetsi-panoherana roa sy tamin'ireo mpitondra politika roa.
Hatramin'ny voalohany, ny ankamaroan'ny fitseran'ireo Rosiana no nirona nankany amin'ireo mpanao hetsi-panoherana, toe-javatra iray izay atsipin'ilay mpanoratra mahabe resaka sy Lehiben'ny vondronn'ny mpanohitra “Other Russia”, Eduard Limonov [ru] ho vokatry ny toetra nationalin'ny Rosiana :
“Korontana ao Istanbul”, 11 Jona 2013, Sary avy amin'i Eser Karadağ CC2.0
Ary dia nanohy nanazava i Limonov,fa tsy zavatra mandeha ho azy ny fiaraha-mizaka ao Torkia. Nilaza ny andraikitra tànan'ny Tontolo manodidina amin'ny fanapariahana ilay hetsi-panoheran'ny Taksim, Limonov nanoratra hoe “Toa tena mitovy amintsika ry zareo Tiorka, toa an'i Chirikova sy ny Alany Khimki [en].
Tsy irery i Limonov, satria marobe ireo Rosiana niditra tao amin'ny Twitter sy LiveJournal haneho ny fanohanany ilay hetsi-panoherana. Arkady Babchenko, Rosiana iray mpanao gazety izay nibilaogy avy eny an-kianja mikasika ilay hetsi-panoherana ao Istanbul, dia tena nanakiana mafy[ru] ilay valintenin'i Erdoğan (avy eo izy voasambotra, voavono [ru] ary noroahana hiala an'i Torkia [en].)
Maro ny fampitahàna an'i Erdoğan tamin'i Putin, indrindra tao amin'ny twitter. Real_Estate_Mos [ru] nandefa bitsika hoe :
Tamin'ny alalan'ny fanambaràn'ireo mpitondra roa izay milaza ny tenany ho mpanompon'ny vahoaka ireo, sergeiolevskii [ru] nibitsika hoe :
Ireo Rosiana manohana an'i Putin dia nisalasala hilaza ny fanohanany an'i Erdoğan, izay teo ambain'ny fitantanany no namparikivy ny fifandraisana eo amin'ny Rosiana-Tiorka, indrindra mikasika ilay resaka Syria. Na dia izany aza, i Nikolai Starikov, mpikambana ao amin'ilay vondrona matanjaka manohana an'i Putin, mpanoratra, ary mpandalina ny resaka tsikombakomba dia nanambara[ru] fa nitsabahan'ny Amerikana iny hetsika iny mba hahatonga fikorontanana ao Torkia sy hanerena ny governemanta hanohana ireo mpiady avy amin'ny mpanohitra ao Syria, izay ambaran'i Starikov fa nezahany nosorohana :
Ilay mpampiasa twitter aliciamillor [ru] dia nilaza ny heviny mikasika ireo andianà bitsika [ru] hita hatramin'izay nilazan'i Erdoğan tao an-kianja fa hanao fitsapan-kevibahoaka izy, tsara lavitra noho ireo politisiana tandrefana izy :
Vondrona iray miteny Rosiana, izay fantatra fa nanohana an'i Erdoğan, ahitàna mponina avy ao amin'ny repoblikan'i Asia afovoany, ny ankamaroan'izy ireo dia Tiorka avokoa, ny fomba fiaina sy fomba fiteny mifandray amin'ny Tiorka “Anatolia”. Mpampiasa iray [ru, uz] ao Uzbekistan (izay famoloana [en] olona an-jatony maro no namalian'ny filohany ny hetsi-panoherana natao ny taona 2005) dia nidoka an'i Erdoğan [ru] tamin'ilay fifehezantena sy fahatoniana nasehony :
Mpampiasa hafa iray, Eva_Alli [ru, kg] avy ao Kyrgyzstan, izay feno korontana ihany koa ao amin'ny governemantany, dia nandoka[ru] ny fihenjanan'i Erdoğan.